China ONE WAY VISION-12120 စက်ရုံနှင့်ထုတ်လုပ်သူများ ထားဝယ်
အမည်: One Way Vision-12120
ပေါင်းစပ်: 120um PVC + 120g လွှတ်ပေးရန်စက္ကူ
အသုံးပြုခြင်း - ဖန်ထည်၊ ပြတင်းပေါက်
Eco solvent နှင့် solvent Printing အတွက် Shawei PVC Perforated Vinyl Glass Sticker Window Film Window Graphic One Way Vision
၁။ Micro perforate vinyl သည်ပြတင်းပေါက်များကြော်ငြာခြင်းနှင့်အလှဆင်ခြင်းများပြုလုပ်သည်
၂။ Micro perforate vinyl ကိုပုံမှာပြထားပေမယ့်အခြားတစ်ဖက်မှာတော့မတွေ့ရပါ။
၃။ Micro perforate vinyl သည် transmittance ကို ၄၀% နှင့်အရောင်အသွေးစုံလင်စွာဖော်ပြခြင်းနှင့် opacity ၆၀% ရှိသည်။
၄။ Shawei ၏ Micro perforate vinyl သည်ပြတင်းပေါက်ကကြော်ငြာတွင်တောက်ပသောဂရပ်ဖစ်ကိုပေးနိုင်သည်
PVC ရုပ်ရှင် 120um
စက္ကူဖြန့်ဝေ 120 ဂ
အရွယ်အစား 0.98 / 1.06 / 1.27 / 1.37 / 1.52 * 50m
အရှည် 1 လိပ် / ctn
အသုံးပြုထားသောနေရာ အရည်ပျော်ပစ္စည်း, ဆိုးဆေး, ခြယ်ပစ္စည်း, ec- အရည်ပျော်ပစ္စည်း
မူလနေရာ Zhejiang, တရုတ် (ပြည်မ)
၃) ပျော့ပျောင်းပြီးချောမွေ့သောဗီနိုင်း၊ အထူးသဖြင့်အရည်ပျော်ပစ္စည်းပရင်တာများအတွက်
၁။ ကားကိုယ်ထည်၊ နံရံကိုယ်ထည်ကြော်ငြာ။
2. အတွင်းပိုင်း & အပြင်ပန်းဆိုင်းဘုတ်များ။
3. ယာဉ်ကြော်ငြာ / ဂရပ်ဖစ်မမှန် arc မျက်နှာပြင်ကြော်ငြာ။
4. ယာယီမြှင့်တင်ရေးနှင့်အရောင်းကြော်ငြာအတွက် 4. ဖယ်ရှားနိုင်သောဗီနိုင်း။
ရှေ့သို့ ONE နည်းလမ်း VISION-14140
အမြင့် Tack ကော်ဗီနိုင်း
ကြမ်းပြင်မြေပုံသဏ္ဌာန် - Dull ဖျာ
LIGHT BOX သည် PVC STICKER-BUBBLE အခမဲ့ဖြစ်သည်
3D အအေး LAMINATION
SATIN အအေး LAMINATION-6080